Siyaasi Xasan Muudey: ‘Waxaan nahay ummad aan xitaa AYAXA iska difaaci karin, Daciifnimada dalkeyga ka jirta’! | HalQaran.com
Siyaasi Xasan Muudey: ‘Waxaan nahay ummad aan xitaa AYAXA iska difaaci karin, Daciifnimada dalkeyga ka jirta’!
Muqdisho (Halqaran.com) – Siyaasiga Xasan Cabdulqaadir Muudey ayaa si dareen ah kaga hadlay dhibaatada uu Ayaxa ku haya beeraha dalka iyo sida ay dadka Soomaaliyeed uga hortaggi la’yihiin.
Bartamaha Soomaaliya ayaa waxaa laba toddobaadkii ka hor lagu arkay Ayax tiro badan, oo si raxan raxan ah ugu duldegaaya dhul beereedyada, iyadoona uu marba marka ka dambeyso ku sii fidaayo dhul hor leh.
Gobolada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ayaa waxaa ka taagan dagaal aad arkeyso inuu u dhaxeeyo beeraleyda iyo Ayaxa, waxa ayna beeraleyda u taag la’dahay Ayaxa duulaanka ku ah dalaga beerahooda.
Xasan Cabdulqaadir Muudey oo dareenkiisa ku cabiraya xaaladda taagan ayaa yiri “Qabweynidii ka jiray dalkeyga waxay iiga soo idlaatay markii dadkii uu iska difaaci waayay cayayaankii, ee aan wada garaneynay ee Ayaxa.”
Waxa kaloo uu yiri “Daciifnimada dalkeyga ka jirta Ayax markaan iska difaaci weynaa ku dareemay. Waxaan nahay umad aan Ayax xitaa iska difaaci karin.”
Xasan Cabdulqaadir ayaa tilmaamay in dalka uu maanta ku sugan yahay marxalad ka hooseysa, intii uu aragti ahaan ka haystay.
“Ayaxa mar keliya dalka ka dilaacay ee beerihii baabi’ibiyay, markaan arkay sida aan isaga difaaci la’nahay ayaa garowsaday in dalkeygu uu ku sugan yahay heer ka sii liita, intii aan is lahaa.” Ayuu yiri Xasan Cabdulqaadir oo la hadlay Warbaahinta gudaha.
Muudey ayaa qaba in tani ay tahay imtixaan ay marayaan dadka Soomaaliyeed, isagoona Soomaalida ugu baaqay inta ay goori goor tahay in ay is dabar qabtaan.
“Waxay ila tahay waa imtixaan iyo baraarug ay mudan tahay inay dadka Soomaaliyeed ku baraarugaan, isna dabar qabtaan. Haddii kale maanta waa Ayax, berrina waa wax ka sii liito anagoo iska difaaci weyno.” Ayuu yiri Muudey.
Ina Muudey ayaa yiri “Umad waxay horumar ku gaari kartaa marka ay wada jirto, laakiin umad kala qub quban, oo iyada dhexdeeda cadow isku ah, horumarka laga suggi karo muxuu yahay?”
Isagoo xoojinaya baaqiisa uu ku baraarujinayo ummada Soomaaliyeed ayaa wuxuu yiri “Baraarujinteeda waxaa waaye dersi aan ka kororsano ama aan ka barano casharka uu maanta inoo dhigay cayayaanka Ayaxa guur guura ama duul duula, wixii doonaba hala dhahee.”
Siyaasiga Xasan Cabdulqaadir Muudey
umad aan ayaxa iska difaaci karin